Usoro Mmepụta maka Usoro nke Brewery
A na-achịkwa mmepụta COFF n'okpuru usoro njikwa njikwa mma. Ogo, arụpụtaghị ihe, na mgbanwe bụ isi ihe na-eche maka COFF. Ekele ya n'ichepụta ihe n'ichepụta n'ichepụta site na ihe ịzụta, ịgbado ọkụ, Polish, nzukọ na nkwakọ, anyị na-enye a ịkwa akwa-mere n'ichepụta ọrụ site na imewe echiche site na-eri-irè mmepụta.
Mbupu nke ụgbọ mmiri 10000L na Australia
10,000L mmiri mmiri ọkụ, 10,000L mmiri mmiri mmiri, 10BBL ụgbọ mmiri gbaa ụka na-etinye n'ime akpa. Anyị na-echebara ihe niile gbasara iji gbochie akụrụngwa ahụ imebi njem.
Iwu maka ụgbọ mmiri gbaa ụka na tankị na-egbuke egbuke dị njikere
Coff Na-akpali Ndị Ọrụ Brewers Nwere Ike
Gini mere ị ga - eji belata akụrụngwa gị maka iji mmanụ na-adịghị mma na nke adịghị arụ ọrụ nke ọma? Ngwa akụrụngwa ọ ga-adị oke ọnụ? Coff nwere ike ime ka ebe ị na-eme ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu, ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke sitere na SS304 ahọrọ, jiri ihe ndị kachasị mma na ihe dị mma iji meziwanye ọrụ gị.
Coff First Brewing Stout na kọfị kọfị
Nke a bụ nnwale anyị nke iji kọfị kọfị, biya biya gbara ọchịchịrị jikọtara ya na kọfị ojii. Anyị na-agbakwunye kọfị n'oge ịchọrọ iji nweta uto siri ike, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịnwe ose na-acha akwụkwọ ndụ.
Usoro biya na ihe mkpuchi
Vidio ndị ahịa anyị. Ha gwara anyị na ụgbọ mmiri Coff na-ahapụ ha pụọ ​​na nbuli dị arọ nke ịchịkwa ihe ọ bụla na-emebi, ha nwere ike itinyekwu uche ugbu a iji wulite aha ha na isi ụtọ siri ike.